AMISOM oo markii ugu horeysay ka hadashay dad shacab ah oo ciidankoodu ku laayeen Sh/hoose – STAR FM SOMALIA
AMISOM oo markii ugu horeysay ka hadashay dad shacab ah oo ciidankoodu ku laayeen Sh/hoose
Hawlgalka Midowga Africa (AMISOM) ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dad shacab ah oo ciidankoodu ku laayeen maalmihii la soo dhaafay labo shil oo ka dhacay degaano ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Shilka hore ayaa ka dhacay agagaarka degmada Qoryooley ka dib markii ciidamada AMISOM ay gantaal garabka laga ganay ku rideen gaari caasi ah oo khudaar waday kaasoo ay ku dhinteen lix ruux oo la socotay.
Shilka labaadna gaadiid ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo ka cararaya qarax wadada loo dhigay ayaa ku jiiray agagaarka magaalada Marko guri ay degenaayeen qoys, hooyo iyo shan caruur ah oo ay dhashay ayaa halkaas ku naf waayey.
AMISOM oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa walaac ka muujisay sida warbaahinta qaar u warinayso shilalkan ka dhacay gobolka Sh/hoose e dadka rayidka ah ay ku dhinteen.
Warkan ayey AMISOM kui sheegtay iney heleen warar hordhac ah oo sheegaya in 17-bishan December, xilli habeen ah in ciidanka AMISOM weerar hoobiyeyaal ah lagu qaaday nawaaxiga degmada Qoryooley.
“Tani waxay dhacday kadib markii ay ciidanka oo roondo ku jira ka war heleen dhaq-dhaqaaqa gaadiid xilli habeen ah kaasoo la rumaysan yahay inuu siday dagaalyahano Shabaab ah. Waxaana jiray heshiis u dhaxeeya maamulka degaanka iyo AMISOM oo mamnuacaya isu socodka gaadiidka xiliga habeenkii si loo yareeyo weerarada argagixiso ee dhaca habeenkii kuwaasoo inta badan dhaca, sababana dhimasha dad rayida” ayaa lagu yiri War-saxaafadeedka.
Warka ayaa intaasi ku daraya in dhaq-dhaqaaqa gaadiidka uu ku kalifay AMISOM in ay dhigato bar-control oo ay uga hortagayso weerarada uga yimaada Al-Shabaab.
“Gaari caasi ah baa ku soo dhawaaday barta control waxaana lagu amray inuu istaago balse darawalka ayaa ka dhega adeegay, ciidankana durbadiiba way toogteen, waxaana halkaas ku dhintay 6 ruux oo gaarigaas saarnayd” ayaa lagu yiri War-saxaafadeedka.
AMISOM sidoo kale waxa ay sheegtay in uu jiray weerar kale oo isna ka dhacay deegaanka Buufow kaasoo kolonyo ciidankooda ah oo ku soo jeeday magaalada Muqdisho ay Shabaab walxaha qarxa ah la beegsadeen balse aysan ogeyn wax khasaare dad rayid ah ka soo gaareen waxayna AMISOM dafirtay qoyska ka kooban hooyada shanta caruurta ah ee gaarigoodu jiiray.
AMISOM waxay ku shaqaysaa sharciyada caalamiga ah ee Xuquuqul aadaha, waxaana ay qaadanaysaa Khasaaraha dadka rayidka ah ee ciidankeedu gaysto, AMISOM iyo dawlada Federalka Soomaaliya ayaa bilaabay baaritaanka labadaas dhacdo, waxaana ay qaadayaan talaabo sax ah marka uu soo dhamaado baaritaankaas” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.